Bounce Rates, Nguva paSiti uye Chiitiko Kutevera Martech Zone
Chitatu, October 12, 2011 Chishanu, June 13, 2014 Douglas Karr
Pachine kusanzwisisa kwakawanda kweiyo tsananguro yeye bounce rate, zvakakanganisa sei saiti yako, uye nemabatiro aungaita kuti uvandudze. Sezvo vazhinji venyu muri kushandisa Google Analytics, kunzwisisa kwekuti Google inobata sei bounce kwakakosha.
Kutanga, unogona kusazviziva asi Avhareji Nguva paSiti kune bounced vashanyi nguva dzose zvakaenzana zero. Mune mamwe mazwi, sezvauri kutarisa Avhareji Nguva paSiti, irikungoratidza chete nguva yakashandiswa pane yako saiti kune avo vashanyi izvo usabhabhauka. Izvo zvinoita sekunge zvisina kujairika kwandiri. Ndingafarire kuziva kuti vanhu vanogara kwenguva yakareba sei vasati vabhuroka kuti vaone kana ndiri kumbobata pfungwa dzavo. Nehurombo, izvo hazvigoneke pasina mamwe ma hacks. Zviedze pachako… mufananidzo uri pano unoratidza mushumo wakanatswa wevashanyi chete vashanyi… zvichikonzera Avhareji Nguva paSiti pamusoro 0.
Sezvineiwo zvakakwana, kana mushanyi wako akabatana nepeji rako mu chero nzira yekutevera (kunze kwekusiya), ivo havana kuisirwa sebhundu! Saka… kana iwe ukawedzera chiitiko chekutevera pabhatani bhatani kana kufona kuti chiitwe, uye munhu anodzvanya… hadzina kuenzanisirwa sebhurezi. Vazhinji vanhu vanofunga kuti bounce chero munhu akamhara pane yako saiti obva asiya. Haisi… chero munhu anogara pane yako saiti, haaite chero nzira, obva asiya.
Kana iwe ukatevera zviitiko kana kuwedzerwa kuwonekwa kwemapeji pane peji, iye munhu nehunyanzvi haana kubhora. Saka kana iwe uri maneja wekushambadzira uyo ari kunetseka neakakwira bounce mitengo, iwe unofanirwa kuona kana vashanyi vari kudyidzana newebsite yako munzira chero ipi vasati vaenda. Izvi zvinogona kuitwa nekuwedzera chiitiko chekutevera kwese kwazvinogona.
Funga nezve peji peji kwaunogona embed chiitiko chekutevera:
Kana iwe uine zvinongedzo pane rako peji izvo kutyaira traffic kure nemaune, ungangoda kuteedzera icho chiitiko. Zvinoda zvishoma kodhi, asi, kuona kuti chiitiko chakatorwa usati wabva papeji.
Kana iwe une jQuery inogoneswa saiti ine maitirwo evashanyi ekudyidzana nemaslider kana zvimwe zvinhu, unogona kuwedzera jQuery Google Analytics plugin inoita kuti zvive nyore kuteedzera zviitiko pane chiitiko.
Imwe sarudzo yepamberi ndeyekuwedzera a chepiri Google Analytics account kune peji rako uye wobva watarisa iko kwechipiri peji rekutarisa kana iro peji richiwanda. Izvi zvinoderedza yako bounce rate kusvika ku0 pane iyo account asi ichakupa iwe avhareji nguva pane saiti manhamba kune wese mushanyi. Ipapo iwe unogona kuwedzera chidimbu chine sefa risingasviki matatu peji maonero. Izvo zvinonatsa kunze chero munhu asina hunyanzvi asina kubhowa nekukupa iwe nenguva pane saiti data.
Uye usakanganwa ku track indasitiri bounce mitengo kuti uone kuti yako saiti inofananidzwa. Imwe katsamba - isu tinowanzo tarisa kuona masosi ane yakakura yekutsvaga chinzvimbo bounce pane yakanyanya yakakwira mwero. Mufambiro wevashanyi kune avo vanobva kutsva vanowanzo kuratidza chiitiko chekubhurawuza kwavanotarisa mitsva yekutsvaga nekusiya mushure mekuwana kapikicha kepeji. Saka usashamisika kana iwe ukabata yakawanda yekutsvaga traffic uye yako bounce mwero inowedzera!
Tags: bounce ratechiitiko chekuteveragoogle analyticsnguva panzvimbo
Vhidhiyo: SmallBox Webhu Dhizaini & Kushambadzira